HomeWararka MaantaLuiz Felipe Scolari Oo Baadhisi Ku Socoto
Tababaraha xulka qaranka Brazil, Luiz Felipe Scolari ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay fadeexado hore leh oo soo wajahday mustaqbalkiisa , kadib markii wadamo ka mid ah, kuwii uu hore uga soo shaqeeyey ay ku soo oogeen dacwad la xidhiidha cashuuro uu musuq-maasuqay.
Scolari ayay wadamada Brazil iyo wadanka Holland ku eedeeyeen inuu lunsaday lacago badan oo cashuuro ah, waxaana la sheegay in la baadhayo jiritaanka eedahaasi.
Masuuliyiinta uga saraysae xidhiidhka kubada cagta Brazil ayaa ka meeraystay inay faah-faahin dheeri ah ka bixiyaan qaabka baadhista iyo dabagalka loogu samaynayo Tabababaraha xulka oo Arintiisu maxkamad taagan tahay.
Laakiin Tababaraha xulka Brazil isagu wuxuu beeniyey inuu jiro khalad uu sameeyey oo la xidhiidha dhinaca cashuura.
“Waxaan si sax ah u dhamaystiray dhamaan cashuurihii ay igu soo dalaceen, wadamadii aan ka soo shaqeeyey oo dhan, had iyo jeerna waan nadiifiyaa lacagta isoo gasha,” ayuu yidhi.
“Haddii wax khaldani ay jiraan, dambigeeda anigu ma lihi. Waxaan rajaynayaa in cadaaladu soo bandhigi doonto xaqiiqda ka dambeysa Arinta.”
Scolari ayaa so ahaa tababaraha xulka qaranka Portugal laga bilaabo 2003-2008, waxaanu sidoo kale wadanka uu u dhashay ee Brazil ku hogaamiyey guushii koobka aduunka ee 2002 ay ka qaadeen xulka Germalka.
Odaygan 65 jirka ahi, wuxuu markale gacanta ku qabatay shaqada xulka Brazil sanadkii 2012, isagoo hogaamin doonaa xulka, koob aduunka sanadkan ee ay Iyagu martigalinayaan.
Cristiano Ronaldo, Lionel Messi & Manuel Neuer Oo Isugu Soo Hadhay Ballon d’Or
Barcelona: 10 Sannadood oo ay Dunida U Talinaysay Iyo 94 Ciyaartoy Oo Taariikhda U Galay
RASMI: Real Madrid oo €31.5m ku iibsatay Danilo